Pressroom - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Qolka saxaafadda
Warar iyo cusbooneysiin ka socota CIRC! Si aad u aragto walxaha kaliya hal nooc, ka dooro miiraha hoosta.
Sifee qayb ahaan:
La helay 159 Shey
Goobta Isbahaysiga Gobolka Galbeedka Slope: Jiirada Galbeedka ee Colorado oo diiradda saareysa Telluride, Durango, iyo gobolka afar geesoodka ah. Waxa laga yaabaa in la waydiiyo in laga shaqeeyo qaar ka mid ah Ridgeway, Gunnison, Montrose, iyo marmar ilaa Waqooyiga ilaa Grand Junction, gaar ahaan dhacdooyinka gobolka. Doorbid adag oo loogu talagalay qof inuu joogo mid ka mid ah kuwan soo socda […]
Goobta Isku-dhafka ah ee Buuraleyda Rocky: Buuraleyda Rocky ee Colorado (meel kasta oo ka timaada Salida, Leadville, Summit, Steamboat, Glenwood Springs, Rifle, Aspen, iwm). Riix halkan si aad u aragto khariidadda buuxda ee xubnaha Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Mas'uul ka ah taageeridda xubnaha CIRC iyo bulshooyinka soogalootiga deegaanka ee Buuraha Colorado. Ka qayb galka xubnaha CIRC ee gobolka iyo bulsho weynta si ay […]
Waqooyiga CO Goobta: Waqooyiga Colorado, oo ay ku jiraan Larimer, Weld, Logan, Boulder, Morgan, Washington, Yuma counties, iwm Waxaan aad ugu dhiirigelineynaa dadka ka socda Degmooyinka Weld, Morgan iyo Yuma inay codsadaan. Aagga(yada) barnaamijka iyo soo koobida guud: Mas'uul ka ah taageeridda xubnaha CIRC iyo bulshooyinka soogalootiga maxalliga ah ee Waqooyiga Colorado. In la hawlgeliyo xubnaha CIRC ee gobolka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si ay isu abaabulaan.
Goobta Iskuduwaha Isgaarsiinta: Isku-dhafka - Iskuduwaha Isgaarsiintu wuxuu awoodi doonaa inuu ka shaqeeyo guriga laakiin waxaa looga baahan doonaa inuu taageero dhacdooyinka shaqsiyeed qaarkood. Iskuduwaha Isgaadhsiinta ayaa la shaqayn doona Maareeyaha Isgaadhsiinta si uu u wanaajiyo oo u taageero ololaha, isbeddelka sheeko, abaabulka, iyo xiriirka warbaahinta ee dhinaca isgaarsiinta. Warbixino ku socda: Maamulaha Isgaadhsiinta Kooban urureed: […]
Memoriam - Ricardo Martinez
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado waxay abaal u hayaan Ricardo Martinez waxayna tacsi tiiraanyo leh u dirayaan xaaskiisa, Pam, iyo qoyskii uu ka baxay Janaayo 20, 2022. In ka badan 30 sano ka hor, Ricardo iyo Pam Martinez waxay abuureen urur guulaystay, awood leh oo la yiraahdo Padres Unidos Waalidiin iyo arday ku hadla luqada Isbaanishka oo soo galooti asal ah oo ay la kulmeen cunsuriyad […]
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) ayaa soo saaray bayaan soo socda si ay uga jawaabaan dabkii naxdinta lahaa ee Degmada Boulder: “Waan la murugooneynaa dhibanayaasha masiibadan, isbaheysigayaguna aad ayuu uga xumaaday dabkii baabi’iyay ee Degmada Boulder. Maxay ahayd inay ahayd wakhti farxadeed in lala kulmo asxaabta iyo qoyska oo loo dabaaldego cusub […]
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) ayaa soo saaray bayaankan soo socda si ay uga jawaabaan toogashadii burburisay ee Aagga Denver: Waa qalbi culus inaan tacsi u dirno qoysaska Alicia Cardenas, Alyssa Gunn-Maldonado, Danny Scofield, Michael Swinyard iyo Sarah Stec oo si macno darro ah loo dilay fal kale oo rabshado ah oo ka dhacay […]